नायिका करिश्माले शेयर गरिन् राजेश सँगकाे फाेटाे फ्यानले गरे यस्ताे कमेन्ट – live 60media
नायिका करिश्माले शेयर गरिन् राजेश सँगकाे फाेटाे फ्यानले गरे यस्ताे कमेन्ट
काठमाडौँ, ८ बैशाख । सदावहार नायिका करिश्मा मानन्धर र महानायक राजेश हमालले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा करिब २ दशकबढी एकसाथ कैयौँ चलचित्रमा काम गरे ।
चलचित्रमा काम गर्दा गर्दै निर्माता बिनोद मानन्धरसँग विबाह गरिसकेकी करिश्माका फ्यानले भने राजेशसँगै विबाह गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहान्थे । तर विबाहित करिश्मा र अविबाहिर राजेशबीचमा त्यो भने सम्भव थिएन ।
यसैबीच करिश्माले मंगलबार मात्र आफ्नो इस्टाग्राममा राजेशसँगको पुरानो तस्विर पोष्ट गरेकी छिन् । जुन तस्विरमा राजु निरौला नामका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, यो जोडीले सगै घरजम गर्नु पर्ने थियो । त्यस्तै चुनी दिनेशले ‘याद आयो’ भनेर कमेन्ट गरेका छन् ।
← सुत्नु अघि मात्रै २ मिनट गर्नुहोस यी काम पाउनुहुनेछ यस्तो चमत्कार !
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार ,यी ५ सपनाहरु झुक्किएर पनि अरुलाई नसुनाऊनुस् …. →